‘म अघोरी कवि हुँ’ - Aarati Patrika
Home » News » ‘म अघोरी कवि हुँ’
in News, विविध 2018-08-30	0 205 Views
शनिबार २०७५ असार २३ को कान्तिपुर कोसेली परिशिष्टांकमा परमश्रद्धेय शताब्दी युगनायक राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले आफू उपचारार्थ भारतको हरियाणास्थित मेदान्त अस्पतालमा केही दिन रहेर स्वदेश फर्केको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीजी ग्राण्डी अस्पतालका डा.चक्रराज पाण्डेलगायत असंख्य मित्रवर्गको सहयोग, सद्भाव एवं शुभकामनाले आफ्नो उपचार सफल भएको र हाल घरैमा स्वास्थ्यलाभ लिइरहेको कुरा बताउनुभएको छ । ९९ वर्षीय राष्ट्रकवि आदरणीय घिमिरेज्यू आउँदो आश्विनको ६ गतेबाट सय वर्षमा पुग्नुहुनेछ । ‘शतायु पुरुष’को जीवन्त इतिहासलाई युगान्तकारी साहित्य साधक बन्दै दशौंदशकको युगनायकत्व : राष्ट्रभक्तित्वको अनुपम प्रेरणा सत्पात्र : लेखनाथजीका तरुणतपसी : विश्वका महान् कवि साहित्य साधकहरुको समश्रेणीत्वमा आफूलाई उभ्याएर– देशवासीलाई भन्नुहुन्छ– ‘म अघोरी कवि हुँ’
आफूले आफूलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ ? अहिले भइरहेका काम के छन्  ?
म एउटा अघोरी कवि हुँ । कुनै सिर्जना स्फुरण भयो भन्दैमा म लेख्दिनँ । अथवा, लेखेर पनि प्रकाशमा ल्याउँदिनँ । अरूले बुझ्ने भएपछि, सहज लागेपछि मात्रै लेख्छु र बाहिर ल्याउँछु । कतिपय गीत पनि कैयौं दिन लगाएर लेखेको छु । ‘लाग्दछ मलाई रमाइलो’ गीत पनि ४ दिन लगाएर लेखेको हुँ । उसबेलाको फुलमार चुरोट धेरै उडाएपछि मात्रै यो गीत टुंगिएको थियो । ‘ऋतम्भरा’ महाकाव्यमा अब दुई सर्ग बाँकी छ, सोचाइ आइसकेको छ । अब केही महिनामा सायद शताब्दी उमेरको छेउछाउमा लेखिसक्छु होला । तत्काल भने अस्ति भर्खरै आएको लेखनाथ पौड्यालजीको जस्तो खण्ड–खण्ड रचना निकाल्ने सोचाइ (योजना) छ, साझा प्रकाशनले सहयोग गर्छु भनेको छ । यसमा ७ गीति नाटक, ७ काव्य, फुटकर रचनाहरू समेटिनेछन् । कवि घनश्याम कँडेल र वासुदेव त्रिपाठीले यो कृतिमा संयोजन÷सम्पादन गर्नुहोला भन्ने छ ।
अर्को बाहिरी विश्वले मलाई चिन्न सक्ने अबको कृति भनेको ‘अश्वत्थामा’ महाकाव्य पनि हो । यसको हिन्दी अनुवाद सकिएको छ । बाहिरी जगत्लाई पढाउनुपर्ने किताब हो यो । आजको अणु होड र शस्त्रअस्त्रको बारेमा मैले कवि चिन्ता सार्वकालिक हुनेगरी लेखेको छु । भाषविद् सनतकुमार वस्तीजीले यसको अनुवादलाई हेर्दै हुनुहुन्छ । यो कृति नेपाल–भारत बीपी कोइराला फाउन्डेसनबाट आउला भन्ने छ । विश्वप्रति एउटा कविको दृष्टकोण के हो भन्ने झलक यो काव्यले दिनेछ । अहिलेको विश्वको निम्ति सबैभन्दा ठूलो भय भनेको अणु आतंक हो । अणु विज्ञानबाट उपलब्धि पनि असाध्यै ठूलो भयो, आतंक र भय पनि उत्तिकै छ । अहिलेको समाज र वरपर प्रविधि केन्द्रित बन्दै गएको हो कि जस्तो लाग्छ । हृदय पक्ष शुष्क बन्दै पो गएको हो कि ? आज सबैतिर मस्तिष्क सक्रिय भयो तर हृदय भने निष्क्रिय । आजको प्रविधि र आधुनिकतामाझ हाम्रो अध्यात्म, नैतिकता, आचरण, संस्कृति कहींकतै हराइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ । धेरैजसो बाहिरै दौडिएजस्तो लाग्छ, भित्र बिर्सेर । आफूलाई बिर्संदाको स्थिति यहाँ छ । देश, गाउँ, समाज छाडेर बाहिरीया बन्नेहरू देख्दा अझै दुःख लाग्छ ।
हो, अरूभन्दा एकदमै अलग र भिन्न शैली मैले आफ्नो सिर्जनामा हुर्काएको छु । मेरो यही विशेषता हो— रहस्यवाद । मैले लेखनाथलाई गुरु थापेकै हुँ, लक्ष्मीप्रसादको ‘मुनामदन’ राम्रो लागेको हो । पछि बनारसमा परीक्षा दिन जाँदा रवीन्द्रनाथ टैगोरको हिन्दी कविताको संग्रह भेटियो । त्यो पढेर म वशीभूत भएँ । रवीन्द्रभन्दा पनि अझ संक्षेपमा भावना अभिव्यक्त गर्ने भनेको कवि कालिदास हो । कासिदास र संस्कृतका अरू कविहरूका कारण मेरो कविता शैली बनेको हो ।
टैगोरलाई पढेपछि मैले ‘कविता भनेको यो रैछ’ भन्ने थाहा पाएको हुँ । संस्कृतको पढाइ आधार भएकाले मैले कालिदासलाई पनि खुबै पढें । एक पंक्तिपछि अर्को पंक्तिमा तुक मिलाएर, क्रमबद्धता राखेर लेख्ने शिल्पी मैले कवि कालिदासबाट पहिल्याएँ । ‘गौरी’ काव्यमा त्यस्तै एकपछिको अर्को सिलसिला र ‘क्लाइमेक्स’ लाई मैले जोडेको छु । ‘नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे’ मात्रै भन्नु त एउटा सुक्ति मात्रै हो । त्यहाँबाट जोडिंदै ‘बिम्झौंला कहाँ पूर्वको पैलो उज्यालै नरहे’ भनेपछि मात्रै सिलसिला जोडियो, क्रमबद्धता पनि देखियो । यो ‘क्लाइमेक्स’ हो, अनि शैलीगत शृंखला पनि । सुक्तिमा अलिक अलंकार र्भयो र शब्दको लचकता थप्यो भने कविता हुन्छ । फेरि लेखाइ र बुझाइ दुवैमा ‘नेपाली हामी रहन्छौं कहाँ’ जस्तो अथवा ‘तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, हिमाल हीराको’ जस्तो सामान्य र सरल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर, गहिराइ भने अलग्गै हुनुपर्छ । कवितामा यो क्रम र सचेतता हुनैपर्छ सदैव ।
Previous: मलाई बदनाम गराउने खेल
Next: दशकौंदेखि एकछत्र नेतृत्व !!